सरकारले भन्यो, ‘प्लास्टिकको चामल फेला परेन, सक्कली चामल नै हो’ – Newsagro.com :
Consumer Crops Main News
July 15, 2017 July 16, 2017 NewsAgro 'प्लास्टिकको चामल फेला परेन, ‘चामल प्लास्टिकको नभई प्राकृतिक नै रहेको', खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण बिभाग Department of food and Technology Quality Control nepal, प्लास्टिकको चामल, शेरचन ब्रदर्स प्राइभेट लिमिटेड, सक्कली चामल नै हो', सरकारले भन्यो
काठमाडौं । प्लास्टिकको चामल भनेर व्यपारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको खाद्यान्न सक्कली नै रहेको खाद्य प्रयोगशालाले पुष्टि गरेको छ । सानो भर्‍याङस्थित शेरचन ब्रदर्स प्राइभेट लिमिटेडबाट बरामद गरिएको चामल खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले शुक्रबार सक्कली नै रहेको प्रतिवेदन महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा बुझाएको हो ।
शेरचन ब्रदर्स व्यवसायी टंकप्रसाद शेरचनले सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ । चामलको नमुना परीक्षणपश्चात विभागले ‘चामल प्लास्टिकको नभई प्राकृतिक नै रहेको’ पुष्टि गरेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुले अखाद्य चामल बिक्री गरेको अभियोगमा बुधबार शेरचनको गोदामबाट चामलको नमुना लिएर अनुसन्धानका लागि खाद्य विभागलाई बुझाएको थियो ।
प्रहरी परिसर टेकुका प्रवक्ता प्रहरी उपरिक्षक प्रद्युम्न कार्कीले खाद्य विभागले सक्कली चामल नै रहेको प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिनुभयो । ‘खाद्य विभागले शुक्रबार चामलको सुक्ष्म परीक्षण गरी प्रतिवेदन हामीलाई बुझाएको छ’, प्रवक्ता कार्कीले भन्नुभयो, ‘खाद्य विभागको प्रतिवेदनमा प्लास्टिकको चामल नभएर प्राकृतिक रूपमा बिउबाट उत्पादन भएको सक्कली चामल नै रहेको उल्लेख गरेको छ ।’
कार्कीले प्रतिवेदनले चामल सक्कली नै भएको पुष्टि भइसकेपछि तारेखमा राखिएका व्यवसायी शेरचनलाई आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याई मुक्त गर्ने जानकारी दिनुभयो । साथै प्रहरीले कार्कीको सिलबन्दीसमेत फुकुवा गर्ने तयारी गरेको छ । प्रहरी परिसरले सक्कली चामलमा प्लास्टिकको चामल मिसाएर बिक्री गरेको अभियोगमा बुधबार सीतापाइलाबाट शेरचनलाई पक्राउ गरेको थियो । बिहीबार भने शेरचनलाई तारेखमा छाडिएको प्रहरीले जनाएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्तीले नक्कली भनि बरामद गरिएको चामल प्राकृतिक नै रहेको पुष्टि गर्नुभयो । वस्तीले भन्नुभयो, ‘बरामद चामल सक्कली नै हो ।’
प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालस्थित एक नम्बर प्रहरी गणमा खानका लागि शेरचनको गोदामबाट चामल खरिद गरिएको थियो । उक्त चामलको प्रयोग गरी पकाइएको भात प्रहरी जवानले खाने क्रममा भूइँमा खसेको थियो । भूइँमा खसेको भातको दाना रबरजस्तै उफ्रिएपछि उक्त चामल प्लास्टिकको हुन सक्ने आशंका गरिएको थियो । सोही आशंकाको क्रममा शेरचनको गोदाममा छापा मारिएको थियो । गोदाममा मिसावट भएको चामल फेला पर्न नसकेको प्रहरी परिसरले जनाएको छ । शेरचनले भारतबाट आयात गरी आरटीसी ब्रान्डको लङ ग्रेन चामल बिक्री वितरण गर्दै आउनुभएको छ ।
← यस्तो छ, पोलेको मकै खानुका आश्चर्यजनक फाइदाहरु !
कसरी थाहा पाउने प्लास्टिकको नक्कली चामल ? →
यो समाचार 31732 पटक पढिएकोबुटवल । रूपन्देही मत्स्य ह्याचरीमा आत्मनिर्भर बनेको छ । माछाको पकेट जिल्ला रूपन्देहीमा माछाका भुरा उत्पादनमा
यो समाचार 31388 पटक पढिएकोरासायनिक मल अनियमितता प्रकरण काठमाडौं । कृषि सामग्री कम्पनीले लिमिटेडले कमिसनका लागि फेरि डीएपी मल खरिद
यो समाचार 22824 पटक पढिएको GM Food Crops Illegally Growing in India • By Colin Todhunter The GM Contamination Register database is run
यो समाचार 3725 पटक पढिएकोम्याग्दी, मङ्सिर १६ गते । जिल्लाका किसान यान्त्रिक हलोतर्फ आकर्षित भएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका किसानले